Falanqaynta Twitter-ka ayaa timid | Martech Zone
Falanqaynta Twitter-ka ayaa timid
Jimco, Juun 12, 2009 Axad, Nofeembar, 3, 2013 Douglas Karr
Gujintu waa wax fudud oo fudud Analytics xirmo sii wadaya inay igu riyaaqaan isticmaalka baakad kasta oo hub qaadashada ah. Muuqaal xiise leh oo dhowaan lagu daray ayaa ah qaar ka mid ah kormeerka Twitter ee cajiibka ah:
Isku-darka tirakoobka Twitter-ka ee xirmadaada Analytics waa fikrad aad u fiican. Xeerka aan u dejiyey si aan u helo ama boggeygu waa:
douglaskarr AMA "douglas IYO karr" AMA "doug IYO karr" AMA martech.zone
Waxay i siisaa faahfaahinta xiriirkeyga Twitter-ka ama dadka kale ee ila sheekaysta, oo ay ku jiraan wadarta guud ee tweets, Jawaabaha, Xiriirinta, Habka wanaagsan, Retweets, Su'aalaha, Tilmaamaha xun, Dirayaasha, Soo-qaateyaasha iyo Hash Tags ee la xusay.
Tags: gujiTwitterfalanqaynta twitter-ka
Xiriiriyaha Macaamiil ee Iibiyaha ee Nolosha Dhabta ah
Muxuu Bing ugu guuleystey Baadhitaanka Fiidiyowga Google
Jun 12, 2009 at 10: 11 PM
Waad ku mahadsan tahay tilmaanta!
Jun 12, 2009 at 11: 57 PM
Waan jeclahay Clicky waana hubaa inay ugu fiican tahay….
Jun 18, 2009 saacadu markay ahayd 9:40 AM
Doug post weyn. Waad ku mahadsan tahay macluumaadka ku saabsan tan. Waxaan suuq ahaan u baahan nahay inaan awoodno inaan aragno wax ka badan oo kaliya twitter-ka waa barta ugu sarreysa tixraaca markaan eegno falanqaynta websaydhka macmiilkayaga. Waan ku faraxsanahay inaan arko Clicky ayaa hogaaminaya tan.